Covid-19 : Ela loatra ny valin'ny fitiliana PCR
mardi, 06 avril 2021 09:15
Na ho an'ny marary, na ho an'ny orinasa mampiasa ireo mpiasa ahiana voan'ny aretina Covid-19, dia mametraka olana ny fahelan'ny valin'ny fitiliana, ankoatran'ny vola izay mivoaka ao anatin'izany.
Ireo mpandeha mivoaka any ivelany, na ireo manainga amin'ny fiara-manidina anatiny na ivelany, dia takiana ny 72ora valin'ny fitiliana izay andovanm-bola hatrany amin'ny 100 000ar, ary averina indray izany fiiliana izany, ary miverina mandoa vola raha nofoanana na nahemotra ny sidina.
Ny an'ireo ananana ahiahy fa marary, na ireo olona manodidina azy, na ireo cas contact kosa, dia mampitebiteby ny saina ny fiandrasana ny valin'ny fitiliana izay maharitra hatrany amin'ny 2 herinandro be izao, misy aza moa no tsy mahazo hafatra miafina amin'ny sms akory.
Velom-panontaniana izany ireo mpampiasa, satria ilay mpiasa ahiana ho marary tsy azo ampidirina miasa, ireo manodidina azy koa ahiana hitondra aretina aty am-piasana, ny karaman'ny mpiasa anefa tsy maintsy aloa. Maro ireo tsy manana congé intsony, dia atao ahoana, na ny asa tsy mandeha, ny valin'ny fitiliana efa ho iray volana tsy mipoitra, ny aretina efa mihombo raha sanatria ka tena marary marina.
Tsy lazaina intsony ny hoe, betsaka koa no faux négatif, na ireo voalaza fa tsy mitondra valaneritna, natao matetika ny fitiliana, nefa dia marary ary mamindra, ka rehefa nojerena ny radio ny taovam-pisefoana dia efa voa, na ihany koa natao ny fitiliana ny rà, dia hita fa mandry ny rà, izay matetika tsy azo an-tsaina io fitiliana rà mandry io.
Mila ampitombopina izany ny toeram-pitiliana sy ny fanafainganana ny vokatry ny fitiliana, fa na ho an'ny ahiana marary, na ireo manodidina azy, na ho an'ny orinasa dia fatiantoka lehibe ny fisalasalana amin'ny fampijanonana mpiasa hiasa satria ahiana ny fahasalamany.